1 QOFKA MARKA UU DHINTO
Ma ogtahay in qofka marka uu dhinto ay maskaxdiisa sii shaqayso ilaa 7 daqiiqo, iyada oo kolba milicsanaysa xusuusihiisa ugu qiimaha badnaa dunida.
Xigasho xog caafimaad
2 XAALAD WALBA QIIMAHEEDA WAXAA LA DAREEMAA
Xaalad walba qiimaheeda ama macaankeeda waxaa la dareemaa marka ay muddo kasoo wareegto, in aan dareemi wayno xaalad walba qiimaha ay leedahay ugana faaiidaysano, waa daciifnimada Aadanaha.
3 AFARTAN IGA QAADO FADLAN
Sida aad rabtid u muran, balse qofna ha caaayin
Sida aad rabto u xanaaq, balse qofna ha dhaawicin
Sida aad doonto u dhaqan, balse qofna ha dulmin
Sida aad rabto isku gooni yeel, balse waligaa isla wayni iska dhowr
4 XIISAHA NOLOSHA
Caqabadaha oo la wajaho waa waxa xiisaha u yeelo Nolosha, ka guulaysigoodana waa waxa macna u yeelo nolosha.
5 DUMARKA CAQLIGA BADAN
Waxaa lagu ogaaday baaritaan cilmi baaris ah oo la sameeyey in dumarka Caqliga badan ay sida badan ku dhamaystaan noloshooda Nin la’aan ama Qoys la’aan.
Sababta waxaa lagu macneeyey in caqligooda oo batay uu tusay in qatar badan ay uga imaan karto Raga, taas oo aakhirka badda Silic, cabsi ay middaas ka cabsanayaan ayey ku door bideen in ay noloshooda kallinimo ku dhamaystaan.
6 XIRIIRKA XUSHMADDIISA
Sida badan xiriirka xushmaddiisa wuxuu ku dambeeyaa dumarka, hadana sidaas ay tahay dumarku mar walba waa u fududdahay in ay ka lugeeyaan raga ay xiriirka la wadaagayaan, waa haddii ay helaan waddo uga soo jiidasho iyo naxariis badan.
7 FADLAN DIB HA UGU LAABAN
Wax walba ha dhaacaan, waxaad doontana suubi, fadlan dib ha ugu laaban waxa ku xanuujiyey duruuftu sida ay doontaba ha noqotee.
8 NOLOSHAADA SII WADO
In aad iska saamaxdo qofka micnaheeda maahan in aad hilmaanto waxa uu kugu suubiyeey, ee waxay la micna tahay in aad heshay Waddo aad noloshaada kusii wadato qofkaas la’aantiis.
9 QALBI QAALI KUGU AH
In aadan qaali ku noqon qalbi qaali kugu ah waa waxa ugu adag ee la noqdo, hadaba mar walba qiimayn ku suubi waxa qaaliga kugu ah sida aad ku tahay.
10 DHALEECAYNTA OO DHIBSATO
Dhaleecaynta oo aad dhibsato micnaheeda waa waxba ha samayn, waxna ha sheegin, waxna ha noqon.
11 QOFNA YUUSAN QAALI KUGU NOQON
Qofna qaali aan laga maarmin agtaada yuusan ka noqon marka aad adiga noqon kartid qof laga maarmi karo.
12 KA FAKAR HADALKAAGA
Haddii aad ka fakarto hadalkaaga laba jeer inta aadan ku dhawaaqin, waxaa hubaal ah in aad ku dhawaaqayso hadal u dhigma macaankiisa laba jeer.
13 DAREENKAAGA HA KUGU EKAADO MARARKA QAAR
Waxaa wanaagsan mararka qaar in dareenkaaga uu adiga kugu ekaado, maxaa yeelay, waxaa dhici karta in dadka aad wax u sheegan lahayd aysan ku fahmi karin.
14 NINKA QOYS YEESHAA
Ninka Qoys yeeshaa waa Nin uu Rabi ku mannaysta Deeqda kaliya ee dunida kasii jiri karta ilaa maalinta Qayaamaha, waana Nin nasiib badan maadaama loo doortay in dheecaankiisa uu kusii waaro Dunida.
15 Dhaawac dhanka Maskaxda
Sugidda aad sugtid waxyaabaha qaar ee aadan awoodda u lahayn in aad hir galiso ama kaaga xiran qof kale, mararka qaar waxaa laga qaadaa dhaawac dhanka maskaxda ah ama qalbiga ah, sidaa darted, sugiddaadu ha noqoto mid aad awooddeeda ogtahay iyo sida ay macquul u tahay.
16 DUMARKA YEYSAN DUMAR LA TARTAMIN
Dumarku ma ahan in ay tartan la galaan dumarka kale ee uu ninkooda la qabo ama markaa uu guursado, waxaa wanaagsan in xaaska la qabo ay diiradda saarto gudashada waajibaadka nolosheeda, tan ubadkeeda iyo ninkeedaba, halka ay ku mashquuli lahayd xaasididda iyo xisaabinta Xaaska kale ee ninkeeda, taas oo u keeni karta nafteeda in ay lumiso gudashada waajibkeeda iyo nolosheedaba.
17 xuquuqda Dadka kale
Marka loo eego Qaanuunka ama Sharciga Aadanaha, qofku wuxuu Dambiila noqdaa marka uu ku tunto xuquuqda dadka kale, balse sharciga Akhalaada qofku wuxuu dambiile ku noqdaa marka uuba ku fakaro in uu Dambi gaysto isaga oo ficil ahaan aan talaabo u qaadin.
18 LAFTA UGU DHEER
Ma ogtahay in lafta ugu dheer lafaha Bani aadamka jirkiisa ay tahay lafta lugta, taas oo koobta 27% dhirirka qofka.
19 LIXDAN ILA GARO
1 Dadku waa is baddalaan
2 dareenkuuna wuu dhumaa
3 Khaladna wuu dhacaa
4 xusuustuna waa waartaa
5 Noloshana ma dhamaato.
6 Adigana waa dhamaataa.